जुगेडा काण्ड हुनबाट जोगिएको कञ्चनपुरको सुन्दरनगर – कर्णाली 24 डट कम
Karnali 24७ आश्विन २०७८, बिहीबार २१:२६
७ असोज, महेन्द्रनगर । ३ कार्तिक २०७७ को राति धनगढीको अस्थायी प्रहरी पोष्ट जुगेडाका इन्चार्जसहित दुई शव मोहना नदीमा फाल्यो । नेपाल–भारत सीमा नजिकै प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउँद तस्करी नियन्त्रणका लागि खटिएका बेला भारततर्फ लैजाँदै गरेको केराउ रोक्न खोज्दा मारिएका थिए ।
उनीहरुको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेका ९ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् भने केराउ व्यापारी धरौटीमा छुटेका छन् । त्यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । गत सोमबार कञ्चनपुरको सुन्दरनगर यस्तै प्रकृतिको अर्को काण्ड हुनबाट जोगिएको छ ।
के भएको थियो सोमबार राति ?
नेपाल–भारत सीमा नजिकै कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका–८ मा सुन्दरनगर गाउँ छ । वारी नेपाली बस्ती र पारी भारतीय बस्ती भएको यो गाउँ पुग्न जोगबुढा नदी हुँदै जानुपर्छ । बाबाथान बजारबाट पश्चिम दक्षिणतर्फ सशस्त्र प्रहरीको बिओपी छ भने त्यहाँबाट करिब ४ किलोमिटर पूर्व दक्षिणतर्फ सुन्दरनगर पर्छ ।
सोमबार दिउँसो सशस्त्र प्रहरीको बिओपी सुन्दरनगर र पारीपट्टी रहेको भारतीय एसएसबीको बिओपीबाट खटिएका अधिकारीहरुले संयुक्त सीमा गस्ती गरेका थिए । साँझ पर्न–पर्न लाग्दा संयुक्त गस्ती सकेर उनीहरु आ–आफ्नो कार्यालय फर्किए । सशस्त्र प्रहरीको बिओपी सुन्दरनगरले चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि नियमित गस्ती गर्दै आएको छ ।
सोमबार साँझ पनि खाना खाएर करिब ६ बजेको समयमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपीका इन्चार्ज सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक मानसिंह बिष्टसहितको टोली सुन्दरनगरतर्फ हानियो । पैदल हिँडेर गएका उनीहरु त्यो क्षेत्रमा पुग्दा राति भइसकेको थियो । सुन्दरनगरस्थित सीमा नजिकै नेपाली भूमीमा एसएसबी र सशस्त्रले संयुक्त डिउटी गर्न बनाएको अस्थायी टहरामा खटिएका एसएसबीका जवानहरु पनि फर्किसकेका थिए ।
सात जनाको टोलीमा गस्तीमा निस्किएको सशस्त्र प्रहरी तीन ठाउँमा विभाजित भयो । उनीहरु तीन जनाको एउटा समूह र दुई/दुई जनाको दुई समूह छुट्टाछुट्टै स्थानमा बाँडिएर तस्करको समूहलाई ढुकेर बसे । सशस्त्र प्रहरी भारतीय मेलाघाट बजारबाट अवैध रुपमा सामान तस्करी गरेर ल्याउने मूल बाटोमै उनीहरुलाई ढुकेर बसेको थियो ।
रातिको करिब ८ बजेको समयमा ६ वटा मोटरसाइकलमा अवैध सामान बोकेर तस्करको समूह सुन्दनगर (नेपाली गाउँ) पुग्यो । चिनी, पीठो लगायतका सामान बोकेर ल्याउँदै गरेको देखेपछि सशस्त्र प्रहरी जवान सुदिप सुनार र सुनिल घिमिरेले मोटरसाइकल रोके । उनीहरुले रोकेर केरकार गर्न मात्र के खोजेका थिए, तस्करी गर्ने मध्येका अर्जुन कुमारसहितका ६/७ जनाले उनीहरुमाथि आक्रमण गरे । तर सशस्त्रका जवानले हात उठाएनन् ।
सुनारमाथि आक्रमण भइरहँदा फुत्केर भाग्न सफल घिमिरेले फोन गरेर अन्य पाँच जनालाई बोलाएपछि आक्रमणकारीहरु अवैध सामानसहित भारततिर भागे । ‘यदि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीले पनि एक्सन लिन खोजेको भए अर्को जुगेडा काण्ड हुने निश्चित थियो, किनकी सशस्त्र प्रहरीका दुई जवानसँग हतियार थिएन,’ स्थानीय बिरबहादुर सुनार भन्छन् । सशस्त्र प्रहरीको स्रोतकाअनुसार पनि उनीहरु दुवै जना जवानसँग घटनाका बेला निःशस्त्र थिए ।
बुद्ध एयरले अन्तमा ७३ जनालाई बचाउने क्याप्टेन शेर्पालाईनै घटनाको दाेष थुपारे
१८ आश्विन २०७८, सोमबार २१:१७
पास्टर केशव आचार्यकाे “रिहाइ”, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पहल गर्ने ७ आश्विन २०७८, बिहीबार २१:२६
भीम रावलले ऐमाले छाेड्ने संकेत?? ७ आश्विन २०७८, बिहीबार २१:२६
कोरियामा एक स्कुल पढ्ने के’टीलाई रे’प गरेको आरोपमा नेपाली प’क्राउ ७ आश्विन २०७८, बिहीबार २१:२६